Môdely meme: pejy hampidinana sy hanaovana meme | Famoronana an-tserasera
Memes dia iray amin'ireo loharano amin'ny Internet izay ampiasainay saika amin'ny zavatra rehetra. Rehefa misy zavatra mitranga ao amin'ny Twitter, amin'ny fahitalavitra, amin'ny tambajotra sosialy amin'ny ankapobeny, fotoana fohy kelikely dia manomboka mahita meme maro ianao izay taratry ny fahatsapana na ny zava-nitranga. Fa ahoana ny sasany faingana toy izany? Eny, manana hafetsena izy ireo, amin'ny alàlan'ny meme template.
Raha te hanatevin-daharana an'ireo izay, raha vantany vao misy zavatra mitranga, dia efa manantona ireo meme "am-perinasa", eto dia mamela anao hisafidy modely meme ahafahanao mandeha haingana kokoa. Amin'izay ianao dia ho isan'ireo voalohany ary, iza no mahalala, angamba hanana ny fotoanao laza amin'ny fahitalavitra na amin'ny gazety ianao rehefa averina.
1 Inona ireo meme
2 Maninona no mampiasa modely meme
3 Meme tranokala modely izay anoroanay
3.1 Maimaim-poana Meme Generator
3.2 Factory Meme
4 Ahoana ny fomba hanaovana modely meme
Inona ireo meme
Ny meme dia sary iray raha ny marina, na noforonina avy tany am-boalohany na nalaina tamin'ny sary iray tamin'ny Internet (mazàna an'ny olo-malaza, sarimihetsika, andian-tantara sns.) miaraka amina lahatsoratra mitady hiteny amin'ny fampiasana hatsikana, fanesoana, fanesoana ... Amin'izany fomba izany, ny fihetsika azo jerena amin'ny sary dia manatsara ny hafatra ampidirina.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana modely meme izay tratra dia ny sary iray ihany no azo ampiasaina amin'ny zavatra samy hafa, na maneho hafatra samihafa.
Fahita tokoa ny fampiasana azy ireo amin'ny tambajotra sosialy, indrindra amin'ny Twitter, na dia hita amin'ny olon-kafa toy ny Facebook na Instagram aza izany.
Maninona no mampiasa modely meme
Ny modely meme dia sary izay efa vonona hiditra amin'ny lahatsoratra, tsy mila miahiahy momba ny fakana ny sary na mitady chord amin'izay tianao holazaina.
Ireo dia ampiasaina indrindra amin'ny hafainganam-pandeha amin'ny famoronana meme, saingy samy manana ny lafiny tsara sy ny ampahany ratsy izy ireo. Ary io tamin'ity faharoa ity no very ny «ankehitriny». Ohatra, alao sary an-tsaina hoe amin'ny lalao baolina kitra dia misy fakana iray misarika ny sain'ny maro. Ny olana dia ao anatin'ny môdely meme dia azo inoana fa tsy hanana azy eo noho eo ianao fa tsy maintsy miandry na mamorona meme avy hatrany am-boalohany. Ho fanampin'izay, tsy maintsy raisina ny kaonty, mba hitsitsiana fotoana hanaovana meme, dia ampiasaina betsaka, ka mety tsy hiteraka vokany originality izany.
Amin'ny ankapobeny, tombony amin'ny fampiasana modely meme Izy ireo dia:
Hafainganana. Azonao atao aza ny manana zava-misy na manao azy ao anatin'ny segondra vitsy, na inona na inona ilaina amin'ny fanoratana ny lahatsoratra na fametrahana sary ary sintonina ny valiny.
Azonao zaraina mivantana amin'ny tambajotra sosialy (tsy mila misintona ny sary ianao ary mampakatra azy avy eo).
Manana meme malaza ianao, indrindra raha manamarina matetika ireo pejin'ny mpamorona meme an-tserasera ianao.
Tsy mila manana fahalalana fanovana sary be dia be ianao. Mila mametraka ny lahatsoratra fotsiny ianao (izay matetika atao amin'ny tranokala iray ihany no ampidirinao ireo modely meme.
Afaka mahita lohahevitra na lohahevitra rehetra ianao.
Raha ny tena izy dia mamorona meme, na mamorona modely meme dia tsotra be. Tsy vitan'ny manana ny fisian'ny fampiharana ianao (tranonkala, programa fanovana sary, fampiharana finday, sns.) Fa afaka mamorona modely anao manokana ihany koa ianao.
Meme tranokala modely izay anoroanay
Afaka mahita modely meme isan-karazany amin'ny Internet ianao. Samy inona ny sary sy ny pejin-tranonkala izay manangona azy ireo ary na ny fampiharana finday aza. Noho izany, hanome hevitra momba ny sasany amin'izy ireo izahay mba hahitanao ny safidy tadiavinao (azonao atao ny manitsy azy amin'ny tranonkala na app).
Maimaim-poana Meme Generator
Izy io dia fampiharana ho an'ny Android, amin'ny teny anglisy, saingy tena tsotra ampiasaina. Ny hany ilainao dia ampidiro ny sary tadiavinao, apetrakao ny lahatsoratra tianao ary dia izay.
Raha manana iPhone ianao dia mety safidy mety izany. Ary manana modely meme be dia be izy; havaozina matetika matetika miaraka amin'ny maodely vaovao ary afaka manao ny iray amin'izy ireo ianao.
Afaka atao koa ianao alefaso ao amin'ny Memedroid ny meme anao, vavahady lehibe indrindra sy vondrom-piarahamonina misy meme misy, noho izany eto no ahafahanao manana vintana betsaka indrindra hijerena izany.
Tranonkala iray ho an'ny solosaina, ary angamba iray amin'ireo be mpampiasa indrindra ankehitriny. Mora be ny mampiasa azy satria ny sary ampiasainao dia azo namboarina. Amin'ity tranga ity dia manana ianao sary efa voatendry (ny modely meme) ary ny anao (izay ampakarinao ary hiara-miasa amin'izy ireo).
Mila mameno fotsiny ireo faritra banga amin'ny lahatsoratra tianao ianao ary kitiho ny bokotra Fampisehoana meme.
Ity tranonkala ity dia manana tranomboky goavan'ny sary vonona ho tonga meme anao. Noho izany, ny tsy mahita izay tadiavinao ao dia saika tsy azo atao mihitsy.
Mazava ho azy, raha te-hamorona meme tsara ianao dia tsy maintsy misoratra anarana. Raha manao meme haingana fotsiny ianao vao afaka mandositra.
Ny zavatra tsara momba ny firaketana dia tsy ny fampiasana ireo fitaovana rehetra ihany, fa ny fahafahany mizara ny zavatra noforoninao tamin'ny fiarahamonina ihany koa.
Ahoana ny fomba hanaovana modely meme
Tianao ve ny mametaka modely anao manokana fa tsy mampiasa rindranasa na tranokala? Avy eo tsy misy olana, ary ny marina dia mora kokoa noho ny nieritreretanao azy io.
Hanombohana azy dia tsy maintsy manana a programa fanovana sary. Tena ilaina izany satria raha tsy izany dia tsy ho azonao atao ny manitsy ny sary tsara, manampy lahatsoratra, sandwich, sns. Ankehitriny, tsy voatery ho programa solosaina izy io; Izy io koa dia mety ho editor amin'ny Internet maimaim-poana, na fampiharana finday mihitsy aza. Amin'ny ankapobeny, izay fitaovana mamela anao manampy lahatsoratra amin'ny sary dia mety aminao.
Manaraka, mila mahita ny sary ianao. Ny tsara indrindra dia izay tsy manana "zon'ny sary", indrindra tsy hahita olana ianao raha mahomby ilay meme. Saingy, araka ny fantatsika, matetika ny sary an'ny olo-malaza no ampiasaina tsy misy alalana (ary mandalo kely izy ireo). Azonao atao ny mampiasa Google hitadiavana ilay mifanaraka amin'ny meme tianao hatao.
Mila mametraka ny lahatsoratra fotsiny ianao, diovy ny valiny mba hitambatra tsara izy ireo (ary tsy mahita glob apetraka eo ambonin'ny sary) ary voila, hanomboka izy io.
Azonao atao ihany koa ny mamela ny habaka lahatsoratra fa foana hovaina, ohatra amin'ny faritra banga, miboiboika kabary tsy voasoratra, ampahany amin'ny sary izay sahaza ny hafatra, sns.
Ireto misy modely meme azonao ampiasaina, rindranasa finday fotsiny no ilainao mamela anao hametraka lahatsoratra na mpanonta sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Meme modely
Fanalahidy hahatongavana ho matihanina amin'ny sary
Esory ny sary aorina amin'ny sary an-tserasera